Tetikasa MiatrikaCovid: 1 284 ny nahazo fiofanana | NewsMada
Tetikasa MiatrikaCovid: 1 284 ny nahazo fiofanana
Tsy mbola miarina ny sehatry ny fizahantany vokatry ny tranga Covid-19. Vao mainka mampanahy ny hoavy ihany koa ny fisian’ny tranga andiany faharoa, isian’ny “variant” izao. Efa maro ny orinasa nikatona, naha very asa aman’aliny. Izany no nahatonga ny mpandraharaha, tamin’ny alalan’ny Fiombonan’ny federasiona fizahantany eto Madagasikara (CTM), nanao ny fandaharanasa MiatrikaCovid, eo ambany fiahian’ny minisiteran’ny Fizahantany (MTTM) ary tohanan’ny Banky iraisam-pirenena.
Tafiditra ao anatin’ity tetikasa ity ny fampiofanana omena ny mpiasa eo amin’ny sehatry ny fizahantany.
Nahatratra 1 284 ny mpiasa nahazo fiofanana tato anatin’ny telo volana, natao tao anatin’ny fotoana niisa 57. Miisa 250 ny fotoana fiofanana maimaimpoana ho an’ny olona maherin’ny 5 000 amin’ity taona 2021 ity.
Misy karazany dimy ny fiofanana. Ny fianarana teny vahiny, ny fahalalana fototra amin’ny fizahantany sy ny fandraharahana, ny fitantanana orinasa, ny informatika ary ny lafiny fambolena. Natao ho an’ireo olona manana fikasana hiova asa sy fihariana ity farany.
Ankoatra ny maha maimaimpoana ny fiofanana, nomena vola ho solon’ny saran-dalana koa ny mpiofana tsirairay.